Barbaarinta Ubadka WQ Mukhtar Ali Sheikh | Berberanews.com
Home QORMOOYIN Barbaarinta Ubadka WQ Mukhtar Ali Sheikh
Barbaarinta Ubadka WQ Mukhtar Ali Sheikh
Banii Aadamku waxalayidhaa waxay isku af-gartaan Hadalka iyo wax isu sheegga, Xayawaankuna urta. Waxa hubaal ah in waalidkeen inna jecelyihiin islamarkaana innala jecel yihiin waxawanaagsan, Sidaa si lamidah carruurtuna waa ay jecelyihiin waalidkood.
Qormadan waxa aan ugu talogalay in aan ku soo bandhigo isla markaanaku iftiimiyo dhibaato xooggan oo dhextaal waalidka iyo ilmaha ay dhaleen.
Ilmuhu waa uu dhashaa ka dib marka uu warkani soo yeedho waxaa la is waydiyaa ilmaha dhashay ma wiilbaa mise waa Gabadh? tahniyadda ka imanaysa asaxaabta iyo Ehelka ayaa Bilaabanta, ilmahan ay ka qaybqaadanayaan Soo dhawayntiisa Asaxaabta iyo Ehelkuba waxa bilaabantain korintiisa, kobcintiisa iyo kool-koolintiisuba halkaa kasii socoto.
Waxa aynu aragnaa Waalidka oo Amarro kaladuwan faraya ilmihiisa wiil ha ahaada ama gabadh ha ahaatee (Tusaale ahaan, Ax, kadaa, Car, Xuux IWM).
Horta waa hubaal qofka ilaahay waaniyaa waansan, qofka ilaahay hadeeyo ayaa hadaysma. waxa jira ubad badan oo aan helin barbaarin wanaagsan haddan ka wanaagsan kuwo helay inbadan oo aynu kasoo sheekaynay balse, waxa hubaala wixii lagu cel-celiyaa inay noqdaan sidaa loogu celceliyey oo ay midho dhalaan.
‘Maalin dhawayd anoo ka xiiranaya Timo-jare kuyaal Xaafadda aan ka deggan ahay magaalada Hargeisa ayaa waxa Rayislaha soo galay Nin Odayah iyo Wiil uu dhalayaabbuhuwaxa uu Rabaa inu ka xiiro timo aad u dhaadheer oo uu wiilku labaxay, Da’ ahaan wiilkuwaa ilaa 15 jir ama kayarba Rayislihii ayuu aabbuhu amar siinayaa isagoo leh “dhammaan kaxiir timaha oo ka dhukur” wiilkuna waaba maroora dilaacsanahayUgu danabayn laga xiir wiilkii walaw aanu ku qanacsanayn sida laga yeelay oo uu dareemayey Afduub iyo Jujuub Wiilka yari waxa uu Ugu hanjabayey aabbaha inuu wax samayndoono anuu aan markaa umaleyey inuu leeyahay hadaan baxsan waayo ama wax lamida’.
Malaga yabaa in uu samayn karayey Habkale oo kafudud inu inankiisa kusoo Dhawaysto?
Waxa uu ogaa nabigu NNKH in ilaalin iyo toos toosin badan ay ubaahanyihiin habluhu. Wiilashu iyagu waa ay ka duwan yihiin marka loo eego dhinacyo badan laakiin iyagaba waqtgian la joogo ma hawl yara korintoodu.
Wiilku marka uu soo Gaadh0 hilaadahan waxa dhacda intabadan in uu waalidku ka qariyo hayntiisa, hantidiisa,Shaqadiisa iyo wax kasta oo uu qabto, kaliya aabaha ilmahan dhalay waxa uu ku dadaalayaa Inuu ku hayo waar waxbaro waliba waa aabbaha ugu wanaagsan wakhtigan aynu joogno.
Waxas oo dhan waxa ka masuul ah waalidka dhalay ubadkan sababta oo ah ma ay barinwax wada lahaanshaha, Mana ay barin Inay hantidan iyaguleeyihiin islamarkaana wada manaafacaadsaaan, umanay sheegin hantidani halka ay taalo iyo sida ay ushaqayso hadday u sheegaanna mid ama laba kamid ahayaa og ee dhammaan caruurta Xaafadda ka dhalataa ma wada oga.
Tani waa tasababta in la arkoilmaha oo balwado aan fiicnayn yeesha sida jaadka, sigaarka, xashiidad iyo qaarkale oo badan.
Hooyadu waxay Kubarbaarin jirtay inanta inay iyadu tahay Inan, inantana laga rabo inay ka caawiso hooyadeed hawlmaalmeedka guriga oo Waa tii Maah maah soomaaliyewd ahayd “Inantii Hooyadeed Hadhuudhka tuntaa, iyana Haadiskay Barataa”.
Hooyadu waxa ay bari jirtay inanta inay inantahay oo anay dhex galin wiilasha ama rabgaba oo waynnagii Mocooyooyinkeen ka maqli jirnay Iyadoo la leeyahay “Naa Dhiidhiibso”
Labadaa Qodab haddi aynu yara dul saarno kuna miisaamno dhaqanka iyo barbaarinta ka dhexaysa hooyada cahdigan, hooyooyinka maantaqaarkood inanta waxba ma baraan aan ka ahayn sida loo hadlo, sida loo jaaso ma loogu ciyaaro muusikada, Sida loo daawado Musalsalka iyo Filimada aan wanaagsanayn ee yaalla guryaheena Markaa miyeynaan odhan karin “Inantii Hooyadeed Filimada Daawataa iyana Fidnaday daawataa”.
Intanta yar wakhtigii hore hadii laodhan jiray “dhiidhiibso” hadda waxaaba la odhanayaa waxa Style ah inaad Dhinac ka banayso jidhkaaga haddii kale waxbaa ka dhiman labbiskaaga.
Markaa tani waa ta sababtay inaynu aragno mar walba hablo aad u da’yar oo xilliyo danbe oo habeenkiiya meeraysanaya hudheelada cawayska ee waawayn iyagoo la socda niman aan qabin balse aan ehel u ahayn (muxrim) lagana yaaba inay sidaa kaga maqnaadaan guryahooda oo meelo kale u dhaxaan.
Tani waa sababtaad u arkayso inan Kadhaxayso reer kooda habeen, laba iyo inkabadanba.
Qoraalka ayaan dheereeyee waxa aan kusoo Gebo-gebayn lahaa dhawr qodob oo aan isleeyahay malaha waa laga faa’idi lahaa haddii la sameeyo:
Macallinka koowaad ee ilmuhu waa hooyada iyo aabbaha dugsigiisa koowaad na waa guriga halkaa sida uu ku yahay uunbuu bulshada dhexdeedana ku noqonayaa.
Previous article“Somaliland diyaar uma aha inay ka midowdo argagixisada” Dr Edna Adan
Next articleMadaxweynaha Somaliland oo kulammo la yeeshay masuulliyiin ka tirsan dawladda Itoobiya iyo DDSI